Himalaya Dainik » ट्रम्पले किमलाई यसरी दिए जन्मदिनको शुभकामना
ट्रम्पले किमलाई यसरी दिए जन्मदिनको शुभकामना
पुस- अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ उनलाई जन्म दिनको शुभकामना सन्देश पठाएका छन्। शुक्रबार राष्ट्रपति ट्रम्पले नेता किमलाई शुभकामना सन्देश पठाएको दक्षिण कोरियाका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार चुङ इ–योङले जानकारी दिएका हुन्। वासिङटनमा भेटघाट गरेका चुङलाई ट्रम्पले उनीमार्फत सन्देश पठाउन आग्रह गरेका हुन्।
उक्त शुभकामनाको सन्देश नेता किमले बिहीबार प्राप्त गरेका थिए। ‘राष्ट्रपति ट्रम्पलाई भेटेको दिन नेता किमको जन्म दिन थियो, जुन उनलाई याद थियो,’ उनले दक्षिण कोरियामा फर्केर भने ‘ट्रम्पले मलाई सन्देश पठाइदिन आग्रह गरेका थिए।’किमको जन्मदिन जनवरी आठ तारिखमा हो। उनी सन् १९८४मा जन्मिएका हुन्।
रातको बेला खान नहुने यी १० खानेकुरा
पाेखरा २६ पुस- हरेक व्यक्तिको खानासँग जोडिएको फरक फरक आदतहरु हुन्छन् । कोही बेलुका चाँडै खाना खान्छन् भने कोही अबेलासम्म खाँदैनन् । शरीरमा हाम्रो खानपानसँग जोडिएको आदतको प्रभाव पर्दछ । तर तपाईले रातको समयमा खाने खानेकुराले शरीरलाई मात्र होइन, निन्द्रालाई समेत असर गर्दछ । केही यस्ता खानेकुराहरु छन्, जसलाई सुत्नुअघि खाँदा निन्द्रा नै लाग्दैन ।
सुत्नुअगाडि अत्यधिक क्यालोरी भएको खानेकुरा खानाले मुटु दुख्ने समस्या पनि हुनसक्छ । यसको साथै केही वस्तुहरु यस्ता हुन्छन्, जसको सेवन सुत्नुअघि गर्दा शरीरलाई अत्यधिक नोक्सानी पुर्‍याउन सक्छ । यहाँ हामीले सुत्नुअघि खान नहुने केही खानेकुराको बारेमा जानकारी दिने प्रयास गर्नेछौं–
जापानीहरु किन खान्छन् सखरखण्ड ?
पाेखरा २६ पुस- संसारमा सबैभन्दा लामो आयु बाँच्छन्, जापानीहरु । जापानको पनि ओकिनावाका बासिन्दा सबैभन्दा बढी बाँच्छन् । आखिर उनीहरुको दीर्घायुको रहस्य के हो ? यस सम्बन्धमा अनेकन खोज भएका छन् । हुन त हामी चाहन्छौं, लामो आयु बाँच्न पाइयोस् । तर लामो आयु पाउनका लागि के गर्नुपर्छ ? यसमा हाम्रो खानपान, जीवनशैली जिम्मेवार छ वा जन्मजात गुण ? हामी बसेको हावापानी वा अन्न उत्पादन पो जिम्मेवार छ कि ?
सदियौंदेखि यस किसिमको खोज भइरहेको छ । यही खोज अहिले जापानको ओकिनावामा केन्दि्रत भएको छ । ओकिनावामा हरेक एक लाख जनसंख्यामध्ये ६८ व्यक्ति सय बर्ष माथिका हुन्छन् । उनीहरु सयबर्ष भन्दा बढी बाँच्छन् । त्यो पनि तन्दुरुस्त र निरोगी ।
ओकिनावाका वासिन्दा खानामा प्रोटिनभन्दा बढी कार्बोहाइड्रेट लिने गरेका छन् । त्यसमा पनि धेरैभन्दा धेरै सखरखण्ड खाने गरेको पाइयो । उनीहरुलाई धेरैजसो क्यालोरी शखरखण्डबाट मिल्छ । रिसर्चबाट थाहा लागेको छ कि धेरै कार्बोहाइड्रेटयुक्त खानेकुरा सेवन गर्नाले हाम्रो शरीरमा यस्ता केही प्रतिक्रिया हुन्छ, जसले उमेर बढ्ने क्रम धीमा गरिदिन्छ । साथसाथै बढी कार्बोहाइड्रेटयुक्त खानेकुराले हामीलाई उमेर बढेसँगै हुने रोग जस्तो क्यान्सर, अल्जाइमर वा मुटुको रोगबाट बचाउँछ । ओकिनावामा मानिस लामो उमेरसम्म बाँच्छन् । तर, उनीहरु बुढ्यौलीमा अशक्त वा अर्कामाथि आश्रति हुँदैनन् । त्यहाँ मानिसहरु बुढ्यौलीको अन्तिम चरणसम्म सक्रिय रहन्छन् ।
ओकिनावामा बुढापाकाहरु ९७ बर्षको उमेरसम्म आफ्नो सबै काम आफै गर्छन् । उमेरसँगै आउने रोगहरुले उनीहरुलाई खास असर गर्दैन । क्यान्सर, मधुमेह, डिमेन्शिया र मुटुको रोग यहाँका मानिसहरुलाई कम मात्रा हुनेगर्छ । भनिन्छ, ओकिनावाका मानिसहरुको खानपानमा पनि उनीहरुको लामो आयुको राज लुकेको छ ।
ओकिनावाका मानिसहरु सुँगुरको मासु, माछा र अरु किसिमको मासु पनि सेवन गर्छन्, तर यसको मात्रा एकदम कम हुन्छ । कुल मिलाएर ओकिनावाका परम्परागत भोजन भनेको हरियो सब्जीले भरपुर हुन्छ । यसमा सबै आवश्यक भिटामिन र खनिज हुन्छ । तर, यसमा क्यालोरी कम हुन्छ । वैज्ञानिकहरु भन्छन् कि, कम क्यालोरीयुक्त डाइटमा ओकिनावाका वासिन्दाका लामो उमेरको राज लुकेको छ । सन् १९३० को दशकदेखि धेरै चिकित्सक वा वैज्ञानिकले यो सल्लाह दिदै आएका छन् कि, जति कम क्यालोरी खानुहुन्छ, उत्तिनै तौल नियन्त्रण हुन्छ । यसबाट तपाईंको उमेर पनि प्रभावित हुन्छ ।
कम क्यालोरीयुक्त खानेकुरा किन यति फाइदाजनक छ ?
यसको ठोस जवाफ अहिलेसम्म फेला परेको छैन । एक संभावना के छ भने यसले हाम्रो शरीरको कोशिकामा अलग किसिमको संकेत मिल्छ । हाम्रो शरीर नयाँ कोशिकाको विकासको कारण मौजुद कोशिकाको संरक्षण र त्यसको मर्मतमा बढी ध्यान दिन्छ । यसको अर्थ कम क्यालोरी लिनाले कोशिकामा विषाक्त तत्व कम जम्मा हुन्छ । सामान्था सोलोन बिएटले जनवारमाथि गरेको रिसर्चमा पायो कि, कम प्रोटीन र धेरै कार्बोहाइड्रेटयुक्त खानपानले तमाम जीवको दिमाग धेरै लामो समयसम्म जवान रहन्छ ।